NCA လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ရေး မွန်ပြည်သစ် ပါတီ၏ ဆွေးနွေးချက်များကို UNFC သို့ တင်ပြမည် - Yangon Media Group
NCA လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ရေး မွန်ပြည်သစ် ပါတီ၏ ဆွေးနွေးချက်များကို UNFC သို့ တင်ပြမည်
NCA လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်များကို ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC)သို့ တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင် နိုင်အောင်မငေးကပြောသည်။ UNFC အဖွဲ့ဝင်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) ဗဟိုကော်မတီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကို နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်မှ ၂၇ ရက်ထိခေါ်ယူခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် (NCA) တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း ယင်းဆွေးနွေးချက်များကို UNFC အဖွဲ့ဝင်များထံ တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံပြုချက်ရယူခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အပစ်ရပ်စာချုပ် ထိုးခြင်း၊ မထိုးခြင်းကို UNFC ၏သဘောထားအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်အောင်မငေးက နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ဒီမိုရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
”ကျွန်တော်တို့က UNFC ရဲ့ အဝန်းအဝိုင်းမှာရှိတော့ UNFC ကိုလည်း နည်းလမ်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ တင်ပြမယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လည်း သွားရောက်ဆွေးနွေးမယ်။ တင်ပြမယ်။ အဲဒီကနေ သဘောတူညီချက်ရပြီးမှပဲ ကျွန်တော်တို့ UNFC အနေနဲ့ပဲသွားမှာပါ။ ထိုးဖို့၊ မထိုးဖို့ကတော့ UNFC ကိုသွားပြီးတော့ ဆွေးနွေးတင်ပြပြီး အကြံပြု ချက်တွေယူပြီးမှပဲသိရမယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ဗဟိုကော်မတီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကို ရေချောင်းဖျားဒေသ ရှိ ပါတီဗဟိုဌာနချုပ်တွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဗဟိုကော်မတီဝင်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအပြင် နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းကလည်း မွန်ပြည် နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအေးဇံဦးဆောင်သော မွန်ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ဟံသာဦးဆောင်သော မွန်ပြည်သစ်ပါတီတို့ ရေးမြို့နယ်၊ ပုပ္ဖဝတိကျေးရွာရှိ ကျိုက်ဒေတမော့ ဗရတ်သာသနာ ပြုနယ်မြေ၊ ကိုရင်လေးကျောင်းတွင် ၁ နာရီကျော်ကြာ အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရေးဆိုင်ရာ သဘောထားများကို မွန်ပြည်နယ်အစိုးရသို့ ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ”အစိုးရအဖွဲ့က ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သဘောထားကိုလာမေးတာပါ။ ဘယ်လိုရှိလဲ၊ ဘာလဲဆိုတာကို လာမေးတာပါ”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ NCA အားနည်းချက်များကိုလည်း ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြောင်း၊ မွန်ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုပါတီတစ်ခု တည်းဖြစ်ရေး မည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း စသည်တို့ကိုလည်း တစ်ဆက်တည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အသက်မပြည့်သေးသူ မိန်းကလေးငယ်ကို ဖုန်းနှင့် ငွေပေးမည်ဟု ပြောဆို၍ သားမယား ပြုကျင့်သည်ဟု ဆို??
မကွေးတိုင်း၌ မိုးရာသီတွင် သစ်ပင်ပေါင်း ၆၃ သိန်းကျော် စိုက်ပျိုးခဲ့
မုတ္တမအိုးဟု ယူဆရသည့် ရှေးဟောင်းစဉ့်အိုးနှင့် မြေအိုးလေးလုံး မုတ္တမကျေးရွာတွင် တူးဖော်တွေ့?
‘ဇာတ်ကားမရိုက်ခင်မှာ ဝေဖန်ပါ။ အကြံပြုပါ။ ထောက်ပြပါ။ မရှုတ်ချပါနဲ့။ ဇာတ်ကားပြီးသွားလို့ မကြ??